Bagan Keyboard Pro 1.5 ~ Windows,Internet,Browsers,Social Networks,Softwares
Bagan Keyboard Pro 1.5
1:15 AM Android Applications 1 comment
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ အားလုံးမျှော်လင့်နေတဲ့ Feature အသစ်တွေနဲ့ Bagan Keyboard Pro ကို Version 1.5 အနေနဲ့ Major Changes တွေ ပြုလုပ်ပြီး ထုတ်လုပ်လိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ အထူးခြားဆုံးအနေနဲ့ Jelly Bean စနစ်သုံး Devices တွေမှာ အရေး၊ အဖတ် နှစ်မျိုးလုံးအတွက် မြန်မာစာ ကို မှန်ကန်စွာမြင် ၊ ရိုက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် မိမိရိုက်လိုက်တဲ့ Font ကိုလဲ အခြား Jelly Bean စနစ်သုံး Devices တွေမှာလဲ မှန်ကန်စွာမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Android 4.0 စနစ်နှင့်အထက်သုံး ဖုန်းများအတွက် အလွန် သုံးသင့်သော Keyboard တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
Bagan Keyboard Pro မူလ Version မှာ ပါတဲ့ အခြား မြန်မာ Keyboard တွေထက်ထူးခြားတဲ့ စာလုံးတွေကို ခန့်မှန်းပေးတဲ့ Auto Suggestion Sytem အပြင် ရရစ်၊ ရပင့်၊ ၀ဆွဲ၊ အောက်မြင့်တွေကို နေရာမှန်အောင် ပြုလုပ်ပေးတဲ့ Smart Zawgyi Feature (ဥပမာ။ ။ "နိုင်" ဟူသော စာလုံးကို ရိုက်လိုလျှင် "န" ရေးစရာမလိုပဲ မူလ "န" ကို "န" အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲပေးခြင်း)၊ စာရိုက်ရာမှာ မြန်ဆန်အောင် Shift Key နှိပ်စရာမလိုပဲ Keyboard Screen ကို Swipe Up လုပ်လိုက်ရုံနဲ့ Shift Key နှိပ်သကဲ့သို့ဖြစ်သွားနိုင်ခြင်း၊ အသုံးများသော စာလုံးများကို Shift Key နှိပ်စရာမလိုပဲ နှစ်ခါနှိပ်ပေးရုံဖြင့် စာလုံးပေါ်ခြင်း (ဥပမာ။ ။ "ဂ" ဟူသော စာလုံးကို ရိုက်လိုလျှင် "၈" ကို နှစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါက "ဂ" ဖြစ်သွားပါမည်။) Keyboard ၏ အလယ်ဗဟိုနေရာတွင်ရှိသော " ~ " Key သည် အဆင့် စာလုံးများကို ရေးရာတွင် အသုံးပြုရန်ဖြစ်ပါတယ်။ (ဥပမာ။ ။ "သတ္တိ" ဟူသော စာလုံးကို ရိုက်လိုလျှင် "သ + တ + ~ + တ + -ိ" ဟု ရိုက်လိုက်ပါက "သတ္တိ" ဖြစ်သွားပါမည်။) Keyboard ၏ အရောင်နှင့် Layout ကိုလဲ အနည်းငယ်ပြောင်းလဲထားပါတယ်။
ယခုကဲ့သို့ ထူးခြားသော Features များ၊ Android 4.0 အထက် မှန်ကန်အောင် ပြုလုပ်ထားသော Bagan Keyboard Pro Version ကို အခမဲ့ ဖြန့်ချိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ (၂.၈၂၀၁၃ မှ ၄.၈.၂၀၁၃ အထိ) ကျင်းပမည့် Yangon ICT Fair တွင်လဲ အခမဲ့ ဖြန့်ချိသွားမည်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
Bagan Innovation Technology ရဲ့Facebook Page မှကူးယူဖော်ပြပါသည်။
Anonymous July 30, 2013 at 12:41 PM
jelly bean မှာပေါ်တဲ့ စာက မမှန်သေးဘူးဗျ
Folder Protect 1.9.5 Full Version
ဖိုင်တွေ ၊ဖို ဒါတွေကို အသုံးပြုလို့ မရအောင် (read လုပ်လို့ မရအောင်) ၊ write လုပ်လို့ မရအောင်(read only) ၊ မမြင်ရအောင် ၊ ဖျက်လို့ မရအောင်ြ...
ဘီအီးဒီအောင်သိုက် ရဲ့ဇတ်လမ်း တိတ်ခွေများစုစည်းမှု့ 
ဘီအီးဒီအောင်သိုက် ရဲ့ဇတ်လမ်းအဟောင်းလေးတွေစုစည်းမှု့ ပါ။ ဒီဘက်ခေတ် ညီငယ် / ညီမငယ် တွေ နားမထောင်ဘူးသေးရင် နားထောင်ကြည့် ပါ။ အ...
အိမ်တွင်း ထိန်းသိမ်းရေး နည်းအသွယ်သွယ်
အိမ်တွေကို သေချာ ရှာဝယ်ရတာ ခက်သလို ထိန်းသိမ်းရန်လည်း ခက်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ရန်ကုန်လို စည်ကားတဲ့ မြို့ကြီးမှာ အိမ် ကောင်းကောင်း ထိန်းသိမ...
Free Download Power ISO 5.4 With Keygen
Iso image file တွေနဲ့အလုပ်လုပ်မယ်ဆိုရင်အတော်ပြည့်စုံတဲ့ tool တစ်ခုပါ။ Main Features Support almost all CD / DVD / BD-ROM image file f...
Free Download Windows 8 Professional With Activator
Windows 8 pro for 32-bit and 64-bit နှစ်မျိုးစလုံးအတွက်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။Activator လည်းပါရှိပြီး စမ်းသပ်ပြီး အလုပ်ကောင်းကောင်းလုပ်တဲ့ အတွက် ...
Add 100 သတင်းစုံ v3 မှာ ဘာတွေပါလာလဲဆိုတော့ ဒေါင်းပြီးသာကြည့်လိုက်တော့ ခိခိ ဒီဗားရှင်းမှာ မလိုတဲ့လိုင်းတွေဖြုတ်တပ်လုပ်လို့ရတဲ့ ဖန...
ဗိုလ်အောင်ဒင်ပြန်လာပြီ နှင့်တွံတေးသိန်းတန် ဇတ်ထုတ်
ဗိုလ်အောင်ဒင်ပြန်လာပြီ.....တွံတေးသိန်းတန်လည်းပါလာတယ်နော်ဟဲဟဲ......ကောလိပ်ဂျင်နေဝင်းရဲ့ ကောင်း လိုက်တဲ့ အပြော ရေရေလည်လည်နားထောင်လို...
Social Networks တွေကို တစ်ပြိုင်နက် Posts တင်ပေးမယ့် Everypost
ဒီနေ့ ခေတ်မှာ Social Networks တွေ အများအပြားရှိပြီး အသုံးပြုသူတွေ ကလည်း တစ်ခုထက်ပိုပြီးအသုံးပြုကြမှာပါ။Social Networks တစ်ခုချင်းစီမှာ Pos...
Easeus Partition Master Professional 9.1.0
သင့် ကွန်ပြူတာက hard disk တွေ ကို manage လုပ်ဖို့tools တွေစုံလင်စွာပါရှိပါတယ်။Windows7and Windows 8 ကို dual-boot လုပ်ဖို့partition...
OfficeSuite Pro7(PDF & HD) v7.1.1237 (Android)
Word, Excel and PowerPoint files တွေ ကို သင့်ဖုန်း မှာ view, create, edit, print and share လုပ်နိုင်ပါတယ်။PDF ဖိုင်တွေကို လည်းကြည့်ရှုနိုင်...
Thu Ya. Powered by Blogger.
Android Applications (131)
Android Manager (2)
android root tools (4)
ANDROID USB DRIVER (1)
android နှင့် ဆိုင်သောနည်းလမ်းများ (16)
android နှင့် ဆိုင်သောဗဟုသုတများ (11)
ANDROID အတွက်မြန်မာဖောင့် များ (3)
antivirus softwares များ (1)
Backup Manager (11)
BED အောင်သိုက်ဇတ်လမ်းတိတ်ခွေ (2)
Browser Tips And Tricks (51)
Burning Softwares (8)
Desktop Enhancement (11)
Desktop Virtuals Tools (1)
Duplicate File Remover (2)
EBOOK များ (23)
Hard Disk Monitor (1)
How To and Tips (223)
HUAWEI နှင့် ဆိုင်သော (1)
imobile firmware တင်နည်းများ (1)
Internet Accelerator (7)
internet download manger (3)
iOS Applications (11)
IOS Manager (3)
ios ဆိုင်ရာ (1)
iOS နှင့်ဆိုင်သော (11)
iPhone နှင့်ပတ်သက်သော (4)
ISO BUNNER များ (1)
LG root လုပ်နည်းများ (1)
OPPO ROOT လုပ်နည်း (1)
Partition Manager (3)
pc softwares (22)
phone software dead (1)
PHOTOSHOP ဆိုင်ရာ (6)
Root Tool For Android (6)
Samsung Firmwares (1)
samsung galaxy roots (1)
SAMSUNG ROOT လုပ်နည်းများ (7)
Skype Softwares (1)
Social Network Tips (32)
System Utility (24)
USB ဆိုင်ရာ (1)
Web Apps And Internet (114)
website လမ်းညွှန် (1)
WIFI SOFTWARE (4)
windows 8 မြန်မာစာ (1)
Windows Password Resetter (1)
Windows Tips And Tricks (116)
မြန်မာဖောင့် ဒီဇိုင်းများ (1)
Official Firmware Searching Tool By SaiArkar ( MMU...
ဖုန်းလာရင် Floating Notification အနေနဲ့ ပြပေးမယ့်...
Myanmar Mobile Zawgyi Changer2V1.0.2 For Android...
Wiki pro (Wikipedia) v3.2.1 For Android
Air Call-Accept V.1.3 (Paid Version)
Google Play Installer V1.0 For Android
MaskMe : Email အတုများပြုလုပ်ပြီး သင့် Email ကိုကာ...
Mozilla ရဲ့Firefox OS သုံး Smart Phone ကို Win...
Air Call-Accept (free) v 1.1
Android Phone ရဲ့Screen On/Off ကိုအလိုလို ပြုလုပ...
Samsung ရဲ့ Find My Mobile Service ကို အသုံးပြု...
Pro Myankey v 2.0 Beta5For Android
Internet Speed Master : Wifi,3G,4G တွေရဲ့Intern...
Digital Physiognomy reads person's face and tells ...
Google က ကြော်ညာ Ads တွေကိုသင့် Gmail ဆီသို့Ema...
Enjoy the spectacular view of New York City at the...
ApHeMo isaHealth Monitoring analyser for Apache ...
Facebook ခနခန Log Out ဖြစ်နေရင် Flipster Pro ပြော...
Longo Blu-ray Copy software isasimple and powerf...
Aurora Blu-ray Media Player isamultimedia player...
Movies,American Series တွေအစုံအလင် ကြည့်ရှုရယူနိုင...
Facebook Graph Search ကို အသုံးပြုနည်းများ
Get your lost files backup to life instantly with ...
mSecure - Password Manager 3.5.1 (Android)
Quickly convert Adobe PDF files to editable Micros...
Peacekeeper : ဘယ် Browser အမြန်ဆုံးလဲစမ်းရအောင်
Bolide Movie Creator is an easy to use HD video ed...
TeamViewer QuickSupport : Android , IOS Devices တေ...
Take control of the processes on your system and e...
Set DNS Pro : အင်တာနက်အမြန်နှုန်းကို မြှင့်တင်ပေးန...
Firefox Offline Installer ကို Download လုပ်နည်း
isDown ? Web Sites တွေ တကယ် Down နေလားစစ်ဆေးဖို့ 
PDFZilla isauseful software toolkit for converti...
ElevatedShortcut : UAC Prompt ကို ကျော်ဖို့ 
K-ML 4.8 isamailing list/newsletter manager that...
Control Center V1.1
ITools 2013 Beta 0524 For Windows XP/7/8
New Metro Tab : Chrome ရဲ့New Tab Page ကို Windo...
IObit Uninstaller: Windows 7/8/8.1 က Programs တွေက...
Quick Disaster Recovery : Virus တွေဖျက်ဆီးသွားတဲ့ ...
Leawo Blu-ray Ripper is an all-inclusive tool to p...
PDF To Speech V 12.5.7 (Android)
Get your deleted files back with Ultima Recovery. ...
Window OS ကို Android Phone/Tablet မှာသုံးမယ်
FACEBOOK / GMAIL ACCOUNT သစ်ဖွင့်ရာမှာ SMS CODE လာ...
Disk Wiper 12 can irreversibly destroy all on-disk...
Batch removal of typical objects from images is wh...
Microsoft Toolkit 2.4.4 Stable Final
ADVANCED SYSTEM CARE ULTIMATE V 6.0.8.289(DATABASE...
SMS Tasks : သင့် Android Phone ကို SMS ပို့ ပြီးခိ...
Gmail ကို Windows 8/8.1 Mail APP မှာထည့်မယ်
1-abc.net File Renamer will let you see that renam...
RootGenius General or SJRoot or Root Wizard v1.0.7...
THE ANDROID EVERYTHING TOOL (AETv6.0)
Cisco IT Essentials Virtual Desktop PC and Laptop
Refresh your desktop withanew amazing view ofa...
Recovery Tools : Install Custom Recovery With One ...
Photomizer Scan2software can easily edit your sc...
Microsoft Account ကို2Step Verification နဲ့ လြုံ...
Safe Mode ကို အသုံးပြုပြီးသင့်ကွန်ပြူတာပြဿနာ ကိုေ...
Video Converter Ultimate isagood choice for you ...
Windows7& 8 Quick Tip: The Hidden Exit Explorer ...
Windows 8 မှာ Recovery Drive or Recovery Disc ပြု...
MouseController : Mouseေ၇ွ့ လျားမှုကို Record & ...
AthTek DigiBand isahandy music program for Windo...
Black Market Alpha 0.49.93
Alert yourself about important events with differe...
Facebook For Android Beta Testing Program : Androi...
QGifer : Video တွေကို Animated GIF ပြောင်းမယ်
WinCatalog 2013 indexes disks, files, and folders ...
WinSettings provides the smart way to clean up and...
Copyright © 2011 Windows,Internet,Browsers,Social Networks,Softwares | Powered by Blogger
Design by Thu Ya | Blogger Theme by Thu Ya - Premium Blogger Themes | Elegant Themes Review